सुशान्तको मृ’त्यु हुनुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झगडा भएको खुलासा ! – Jagaran Nepal
सुशान्तको मृ’त्यु हुनुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झगडा भएको खुलासा !
जतिवेला सुशान्तको निधन भयो त्यतीवेला उनको घरको सिसीटिभी क्यामेराले काम नगरेको बताइएको भएपनि प्रहरीले त्यो गलत भएको जनाएको छ । उनको घरको सिसीटिभी क्यामेराले काम गरेको छ । घटना भएको बेलामा सुशान्तको प्यारो कुकुर फज अर्को रुममा थियो । सुशान्तकी साथी पायल रोहतगीका अनुसार उनको ट्वीटर एकाउण्टवाट लगायत केही कमेन्ट डिलिट भइरहेका छन् ।source: etajakhabar